MAHAFINY Sukhoi SuperJet SSJ-100 FSX & P3D
Ity ny eksklusif amin'ny Rikoooo ny Sukhoi SuperJet 100 teratany FSX ary Prepar3D v4. Nahazoana alalana tamin'i Edgar Guinart López (AEROPROYECTO) i Rikoooo dia nanova ity modely ity izay natao ho an'ny FS2004 voalohany.
Famaritana manokana: Ity fonosana ity dia miaraka amina sifotra virtoaly izay ilay A321 default FSX ary namboarin'i Rikoooo (tsy misy VC maimaim-poana amin'ny SSJ-100 amin'izao fotoana izao), na izany aza, ny Panel 2D dia an'ny SSJ-100 noforonin'i Edgar Guinart López, anjaranao ny misafidy, na misidina amin'ny VC ianao ny maody na mode 2D Advanced tontonana amin'ny SSJ-100, na izy roa. Na izany na tsy izany dia azo fehezina tsara ny fiaramanidina.
Miaraka amin'ny feo avy amin'ny SSJ-100, Call Out Sounds, V1 Vr V2 feo, RCB Groundhandling gauge, FMC, ny tontonana 2D dia misy dikan-teny roa na ny efijery 16 / 9 na ny efijery 4 / 3. Repoblika telo: Aeroflot, Interjet, White.
Mariho fa ao amin'ny 2D Panel kinova add-on manomboka ao SADY & MAizina mode, vakio ny boky misy mari-pahaizana tsara ho an'ny rafitra. Mba hanombohana bateria dia mila manaisotra ny fiarovana fiarovana miaraka amin'ny bokotra havian'ny totozy, tena zava-dehibe tokoa io! Raha tsy izany, mety ho voasakana ianao amin'izao fotoana izao, jereo ny sary eto ambany:
Ny sasany aminareo dia hamela fanehoan-kevitra hilazana fa tsy mandeha amin'ny milina 2D Panel ny masinina, fa tsia, manomboka tsara tokoa izy raha toa ka manaraka farafaharatsiny amin'ny fomba fiasa na ho an'ny FSX or Prepar3D v4 +.
The Sukhoi SuperJet 100 (fanafohezana: SSJ100, fantatra ihany koa amin'ny anarany taloha hoe Russian Regional Jet na RRJ, amin'ny teny Rosiana: Сухой Суперджет 100) dia fianakavian'ny fiaramanidina rezionaly an'ny orinasa Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC). Ny sidina voalohany dia niseho tamin'ny May 19, 2008.
Ny SuperJet 100 dia tokony ho hita amin'ny dikan-teny maromaro arakaraka ny halavan'ny fuselage ho an'ny zotra mpandray anjara manomboka amin'ny 75 ka hatramin'ny mpandeha 95.
Ao amin'ny 2014, ny varotra iray an'ny Sukhoi SuperJet 100 dia napetraka tao amin'ny serivisy (Wikipedia)
Nohavaozina taminy 26 / 09 / 2019: FSX / FSX-SE Fanamboarana tampoka amin'ny virtoaly virtoaly izay tsy hita, miankina amin'ny toeran'ny fomba fijery.
Downloads 21 950
AEROPROYECTO (Edgar Guinart López), teratany FSX/P3D Fiovàn'ny Rikoooo